Ma arki karno AirPods 3 ilaa xagaaga kadib | Waxaan ka socdaa mac
Bilaabashada AirPods 3 waa la daahi karaa ilaa rubac saddexaad ee sanadka. Tani waa waxa uu maanta xaqiijiyey falanqeeyaha caanka ah ee deegaanka Apple Ming-Chi Kuo. Waan arki doonaa haddii uu saxan yahay iyo in kale. Hadda waxay igu habboon tahay in badan oo Apple ay daabacday xayeysiiska AirPods Pro.
Ma aanan aqbalin inuu sameeyay maalmo ka hor intaan la bilaabin 3 AirPods. Iyo intaa ka sii badan, haddii xayeysiintu ay muujineyso faa'iidooyinka ku habboon talooyinka silikoonka iyo joojinta buuqa, laba astaamood oo AirPod-yada cusub aysan lahaan doonin. Laakiin haddii aakhirka ay run tahay in weli ay bilooyin ka hadhsan yihiin soo saarista hawada cusub ee 'AirPods 3', way ila habboon tahay ... way igu habboon tahay ...
Waxaan haysannaa maalmo kooban warar xan ah oo kala duwan oo sheegaya in Apple ay maalmo yar gudahood ku daah fureyso AirPods 3 cusub.Waxaan horey u aragnay qaar ka mid ah akhristayaasha oo aan si qarsoodi ah uga qaadnay sawirada "AirPods" cusub, "sidaa darteed rajooyin ayaa laga soo saaray bilowga dhow. waa maxay Ming-Chi Kuo uun kala daadsan.
Wax soosaarka ballaaran ee Apple jiilka saddexaad ee AirPods ayaa ka bilaaban doona rubuc saddexaad 2021, sida ku xusan qoraalka maalgashadayaasha falanqeeyaha warshadaha elektarooniga Ming-Chi Kuo. Taasi waxay ka dhigan tahay in AirPods 3s aysan soo rari doonin illaa dhamaadka sanadka, laga yaabee inay tahay waqtigii loogu talagalay xilliga dukaamaysiga ee 2021.
Tani waxay si cad uga hor imaaneysaa wararka xanta ah ee bishan Maarso Apple waxay amaahin lahayd iyaga dhacdo macquul ah. Munaasabadda waxaa lagu qaban karaa iyadoo la bilaabayo qalab kale, laakiin sida laga soo xigtay Kuo, kuma jiri doonto soo bandhigida AirPods 3.
Kuo waxay rajeyneysaa wadarta shixnadaha AirPods ee ka yimaada Q2021 2021 ilaa Q25 55 inay hoos u dhacdo qiyaastii 3 boqolkiiba sanadkii illaa 23 milyan oo cutub. Haddii dalabka AirPods 2021 uu ka fiicnaado sidii la filaayay, rarka afar meelood meel ee AirPods wuxuu sii joogi doonaa sanad-ka-sannad 78 cutub. Kuo wuxuu saadaalinayaa in wadarta rarka AirPods ee maraya illaa XNUMX ay hoos ugu dhici doonto XNUMX milyan oo unug, marka la barbardhigo 90 malaayiin la iibiyey 2020.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ma arki karno AirPods 3 illaa xagaaga kadib
Apple Cook waxay ku darsan doontaa hadhuudhkeeda si ay Shiinaha uga dhigto mid casri ah